ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် မိသားစုဆက်ဆံရေး – DigitalTimes.com.mm
နည်းပညာနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ အရမ်းကိုကျယ်ပြန့်လာတဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာ ပြောရရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို မသုံးတဲ့သူ မရှိသလောက်နီးနီးဖြစ်နေပါပြီ။ ကလေးကအစ လူကြီးတွေအဆုံး ဆိုရှယ်မီဒီယာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာကြချိန်မှာ နောက်ဆက်တွဲဘယ်လိုကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ??
ကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေးမိတာက မိသားစုဆက်ဆံရေးပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို လိုတာထက်ပိုသုံးမိပြီဆိုရင် ကလေးအပေါ်ဂရုစိုက်ချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရှိနိုင်ပါတော့မလား?? ဒီနေရာမှာ ကလေးကိုဂရုမစိုက်မိဘဲ ဖုန်းကိုအသည်းအသန်သုံးတာမျိုးကိုပဲပြောလိုပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ကလေးအရွယ်မှာ မိသားစုကသာ နည်းပညာကို (ဒီမှာတော့ ပြောရရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာကအဓိကပါပဲ) လွန်လွန်ကဲကဲသုံးနေမိပြီဆိုရင် တွေ့ရသလောက် ကလေးတွေမှာ အထီးကျန်တာမျိုးတွေ၊ မိသားစုနဲ့ပြောဆိုတိုင်ပင်မှုတွေ ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်သွားပါတယ်။
ဒါက မိဘတွေတင်ဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်း တစ်ယောက်တစ်ယောက် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖေးမရမယ့်အချိန်မှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအလွန်အကျွံသုံးမိပြီဆိုရင်လည်း လုံးဝ ရေငုံနှုတ်ပိတ် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသလိုမျိုးလောက်ထိ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်နှမသံယောဇဉ်လည်း ဝေးလာတာပေါ့။ လူချင်းနီးရက် စိတ်ချင်းဝေးလာတာမျိုးက ဆိုရှယ်မီဒီယာအသုံးများလာပြီးနောက် မိသားစုတွေမှာ တော်တော်တွေ့လာရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းဆို ၁၀နှစ်ကလေးကအစ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်မှာ တော်တော်လေးစွဲလမ်းလာကြတာပါ။
အင်တာနက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့ဆိုတာ တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ရှာရှာဖွေဖွေလေ့လာသင်ယူကြတာတွေအစား ဆိုရှယ်မီဒီယာက ဝါးမျိုလိုက်တဲ့အခါ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကိုအနည်းနဲ့အများသွားထိပါတယ်။ ထားပါတော့ ဒါကတော့ ပညာရေးပိုင်းဆိုင်သွားပါပြီ။ အခုအရေးကြီးတာက မိသားစုဆက်ဆံရေးပါ။ အရင်က တီဗီရှေ့မှာထိုင်ပြီး စကားလက်ဆုံပြော ဆိုးကောင်းတိုင်ပင်ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေက အရင်ခေတ်မှာပဲကျန်ခဲ့သလားလို့အောက်မေ့လာရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းသေးတာတစ်ခုက သူများနိုင်ငံတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကျွန်တော်တို့ဆီက လူကြီးသူမတွေ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို(ဖုန်းကို) အရမ်းကြီးစွဲလမ်းလွန်းတဲ့ထဲမပါသေးဘူးလို့တော့ ထင်မိပါတယ်။ စွဲလမ်းလွန်းတာက မိဘတွေထက် ကလေးတွေပါပဲ။ ကိုယ်က မိသားစုထဲကနေ ကွဲထွက်နေသလို အထီးကျန်နေသလိုလို စိတ်တိုင်းမကျသလိုလို ဒါတွေအားလုံးက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုက ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အစွဲလမ်းလွန်လို့ဖြစ်နေတာတွေလို့ပဲ မြင်သလို ကိုယ်တွေ့ဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ ၃နာရီလောက် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရှိနေကြပြီး မိသားစုအပေါ်လည်းအချိန်ပေးတာ နည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မိသားစုအချင်းချင်းကြား စိတ်ချင်းဆက်စပ်နားလည်မှုတွေက ထင်သလောက် အားမကောင်းဘဲ ခပ်တန်းတန်းဖြစ်လာပုံပါပဲ။
ကလေးတွေအတွက်ကတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်တွေက တော်တော်များပါတယ်။ ဘာကိုမှ အကောင်းအဆိုးမှန်းခွဲခြားမသိနိုင်သေးတဲ့အရွယ်မှာ မိဘတွေအနေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသာ ကြားဖြတ်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် အနည်းနဲ့အများနစ်နာမှာက ကလေးတွေပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိဘဲလည်း ကောင်းကောင်းကြီးပြင်းခဲ့ကြတဲ့ အရင်ခေတ်လူတွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက မရှိမဖြစ်လောက်ထိအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့သက်သေလို့ပြောရမလားပါပဲ။
ကလေးလူကြီးခွဲပြောစရာမလိုဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောချင်တာက ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမရှိခဲ့တဲ့ခေတ်က မိသားစုနွေးထွေးမှုနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေလွှမ်းခြုံထားတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မိသားစုဆက်ဆံရေးက သေချာတာက လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဝေးရောက်နေတဲ့ လူချင်းဝေးနေရတဲ့မိသားစုတွေအတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုတာက နီးစပ်အောင်ဖန်တီးပေးတဲ့ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဆိုပေမယ့် နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေပါလျက် စိတ်ချင်းဝေးနေသလိုဖြစ်နေတာမျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်သိပ်သဘောမကျလှပါဘူး။ မရည်ရွယ်ပါပဲနဲ့ မိသားစုချင်းစိတ်ချင်းဝေးလာကြတာ ဆိုရှယ်မီဒီယာက တစ်ပိုင်းတစ်ကဏ္ဍပါဝင်တယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို တစ်နေ့ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ထိပဲသုံးဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Challenge လုပ်ပြီး မိသားစုနဲ့စကားလက်ဆုံပြော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဝေမျှပြီး နွေးထွေးတဲ့မိသားစုတစ်ခုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း…နွေးထွေးနေဆဲမိသားစုတွေလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်မဝေးကွာကြစေဖို့ဆုတောင်းရင်း….
နညျးပညာနဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှေ အရမျးကိုကယျြပွနျ့လာတဲ့ဒီခတျေကွီးမှာ ပွောရရငျ ဆိုရှယျမီဒီယာကို မသုံးတဲ့သူ မရှိသလောကျနီးနီးဖွဈနပေါပွီ။ ကလေးကအစ လူကွီးတှအေဆုံး ဆိုရှယျမီဒီယာကို တှငျတှငျကယျြကယျြသုံးလာကွခြိနျမှာ နောကျဆကျတှဲဘယျလိုကိစ်စတှဖွေဈလာနိုငျမယျထငျပါသလဲ??
ကြှနျတျောပထမဆုံးတှေးမိတာက မိသားစုဆကျဆံရေးပါ။ မိဘတှအေနနေဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာကို လိုတာထကျပိုသုံးမိပွီဆိုရငျ ကလေးအပျေါဂရုစိုကျခြိနျလုံလုံလောကျလောကျရှိနိုငျပါတော့မလား?? ဒီနရောမှာ ကလေးကိုဂရုမစိုကျမိဘဲ ဖုနျးကိုအသညျးအသနျသုံးတာမြိုးကိုပဲပွောလိုပါတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကို ပွုစုပြိုးထောငျပေးဖို့ အရေးကွီးတဲ့ ကလေးအရှယျမှာ မိသားစုကသာ နညျးပညာကို (ဒီမှာတော့ ပွောရရငျ ဆိုရှယျမီဒီယာကအဓိကပါပဲ) လှနျလှနျကဲကဲသုံးနမေိပွီဆိုရငျ တှရေ့သလောကျ ကလေးတှမှော အထီးကနျြတာမြိုးတှေ၊ မိသားစုနဲ့ပွောဆိုတိုငျပငျမှုတှေ ပြောကျခွငျးမလှပြောကျသှားပါတယျ။
ဒါက မိဘတှတေငျဘဲမဟုတျပါဘူး။ ညီကိုမောငျနှမအခငျြးခငျြး တဈယောကျတဈယောကျ တိုငျပငျဆှေးနှေးဖေးမရမယျ့အခြိနျမှာ ဆိုရှယျမီဒီယာကိုအလှနျအကြှံသုံးမိပွီဆိုရငျလညျး လုံးဝ ရငေုံနှုတျပိတျ အဆကျအသှယျပွတျသှားသလိုမြိုးလောကျထိ ဖွဈပါတယျ။ မောငျနှမသံယောဇဉျလညျး ဝေးလာတာပေါ့။ လူခငျြးနီးရကျ စိတျခငျြးဝေးလာတာမြိုးက ဆိုရှယျမီဒီယာအသုံးမြားလာပွီးနောကျ မိသားစုတှမှော တျောတျောတှလေ့ာရတဲ့ ကိစ်စတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ခုနောကျပိုငျးဆို ၁၀နှဈကလေးကအစ ဆိုရှယျမီဒီယာအပျေါမှာ တျောတျောလေးစှဲလမျးလာကွတာပါ။
အငျတာနကျကိုကောငျးကောငျးအသုံးခဖြို့ဆိုတာ တကယျအရေးကွီးပါတယျ။ အငျတာနကျမှာ ရှာရှာဖှဖှေလေလေ့ာသငျယူကွတာတှအေစား ဆိုရှယျမီဒီယာက ဝါးမြိုလိုကျတဲ့အခါ ကလေးတှရေဲ့ အနာဂတျကိုအနညျးနဲ့အမြားသှားထိပါတယျ။ ထားပါတော့ ဒါကတော့ ပညာရေးပိုငျးဆိုငျသှားပါပွီ။ အခုအရေးကွီးတာက မိသားစုဆကျဆံရေးပါ။ အရငျက တီဗီရှမှေ့ာထိုငျပွီး စကားလကျဆုံပွော ဆိုးကောငျးတိုငျပငျကွတဲ့ဖွဈစဉျတှကေ အရငျခတျေမှာပဲကနျြခဲ့သလားလို့အောကျမလေ့ာရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကံကောငျးသေးတာတဈခုက သူမြားနိုငျငံတှနေဲ့ယှဉျရငျ ကြှနျတျောတို့ဆီက လူကွီးသူမတှေ ဆိုရှယျမီဒီယာကို(ဖုနျးကို) အရမျးကွီးစှဲလမျးလှနျးတဲ့ထဲမပါသေးဘူးလို့တော့ ထငျမိပါတယျ။ စှဲလမျးလှနျးတာက မိဘတှထေကျ ကလေးတှပေါပဲ။ ကိုယျက မိသားစုထဲကနေ ကှဲထှကျနသေလို အထီးကနျြနသေလိုလို စိတျတိုငျးမကသြလိုလို ဒါတှအေားလုံးက ကိုယျကိုယျတိုငျကိုက ဆိုရှယျမီဒီယာကို အစှဲလမျးလှနျလို့ဖွဈနတောတှလေို့ပဲ မွငျသလို ကိုယျတှဆေို့လညျးဟုတျပါတယျ။
လူငယျတှအေနနေဲ့ တဈနကေို့ ပမျြးမြှ ၃နာရီလောကျ ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာရှိနကွေပွီး မိသားစုအပျေါလညျးအခြိနျပေးတာ နညျးလာတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ မိသားစုအခငျြးခငျြးကွား စိတျခငျြးဆကျစပျနားလညျမှုတှကေ ထငျသလောကျ အားမကောငျးဘဲ ခပျတနျးတနျးဖွဈလာပုံပါပဲ။
ကလေးတှအေတှကျကတော့ ဆိုရှယျမီဒီယာရဲ့ နောကျဆကျတှဲအန်တရာယျတှကေ တျောတျောမြားပါတယျ။ ဘာကိုမှ အကောငျးအဆိုးမှနျးခှဲခွားမသိနိုငျသေးတဲ့အရှယျမှာ မိဘတှအေနနေဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာကိုသာ ကွားဖွတျဝငျခှငျ့ပွုလိုကျရငျ အနညျးနဲ့အမြားနဈနာမှာက ကလေးတှပေါ။ ဆိုရှယျမီဒီယာမရှိဘဲလညျး ကောငျးကောငျးကွီးပွငျးခဲ့ကွတဲ့ အရငျခတျေလူတှကေ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေ မရှိမဖွဈလောကျထိအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့သကျသလေို့ပွောရမလားပါပဲ။
ကလေးလူကွီးခှဲပွောစရာမလိုဘူးဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောအရှငျးဆုံးပွောခငျြတာက ဆိုရှယျမီဒီယာတှမေရှိခဲ့တဲ့ခတျေက မိသားစုနှေးထှေးမှုနဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှလှေမျးခွုံထားတဲ့ ဒီနခေ့တျေမိသားစုဆကျဆံရေးက သခြောတာက လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဝေးရောကျနတေဲ့ လူခငျြးဝေးနရေတဲ့မိသားစုတှအေတှကျ ဆိုရှယျမီဒီယာဆိုတာက နီးစပျအောငျဖနျတီးပေးတဲ့ ဆကျသှယျမှုတဈခုဆိုပမေယျ့ နီးနီးကပျကပျရှိနပေါလကျြ စိတျခငျြးဝေးနသေလိုဖွဈနတောမြိုးကိုတော့ ကြှနျတျောသိပျသဘောမကလြှပါဘူး။ မရညျရှယျပါပဲနဲ့ မိသားစုခငျြးစိတျခငျြးဝေးလာကွတာ ဆိုရှယျမီဒီယာက တဈပိုငျးတဈကဏ်ဍပါဝငျတယျလို့ ကြှနျတျောတော့ မွငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေို တဈနကေို့အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုလောကျထိပဲသုံးဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကို Challenge လုပျပွီး မိသားစုနဲ့စကားလကျဆုံပွော ဆှေးနှေးတိုငျပငျဝမြှေပွီး နှေးထှေးတဲ့မိသားစုတဈခုပွနျလညျတညျဆောကျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးရငျး…နှေးထှေးနဆေဲမိသားစုတှလေညျး ဆိုရှယျမီဒီယာကွောငျ့မဝေးကှာကွစဖေို့ဆုတောငျးရငျး….